1 TWD သို့ USD ᐈ ပွောငျး NT$1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် တွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ
1 TWD သို့ USD
သငျသညျပြောင်းလဲပါပြီ 1 🇹🇼 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ 🇺🇸 အမေရိကန် ဒေါ်လာ. သငျသညျအရှိဆုံးတိကျမှုရလဒ်ပြသနိုင်ဖို့ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုအသုံးပြုပါ. ငွေကြေးပြောင်း 1 TWD သို့ USD. ဘယ်လောက်လဲ NT$1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ? — $0.0329 USD.ယင်းကိုကြည့်ပါ ပြောင်းပြန်သင်တန်း USD သို့ TWD.ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်၌စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည် TWD USD သမိုင်းဆိုင်ရာဇယား, နှင့် TWD USD သမိုင်းဆိုင်ရာမှာ data ငွေလဲနှုန်းကို၏. ကြိုးစားကြဖို့အခမဲ့ခံစားရ ပိုပြီးပြောင်း...
TWD – ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ်
ပွောငျး 1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ
မှုနှုန်းခြင်းအားဖြင့်: $0.0329 USD
ပြောင်းပြန်: NT$30.402 TWD
မင်းသိလား? တစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်, ထိုနေ့၌, ငွေကြေးနှုန်းကို ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် ရန် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ခဲ့: $0.0325. ထိုအချိန်မှစ. ငွေလဲနှုန်းရှိပါတယ် တိုး 0.000383 USD (1.18%).
50 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ100 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ150 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ200 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ250 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ500 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1000 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ2000 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ4000 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ8000 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ20 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ888 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ12300 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ200000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာ342 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1 ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ37440 Presearch သို့ အိန္ဒိယ ရူပီး1.5 ဘရာဇီး ရီးယဲ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ145 ယူရို သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ115000 ကနေဒါ ဒေါ်လာ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1 ကနေဒါ ဒေါ်လာ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1 အင်ဒိုနီးရှား ရူပီးယား သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ
1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ ယူရို1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ ဆွစ် ဖရန့်1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာ1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ ချက်ခိုရိုနာ1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ ပိုလန်ဇလော့တီ1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာ1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ မက္ကဆီကို ပီဆို1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲ1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ အိန္ဒိယ ရူပီး1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီး1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ ထိုင်းဘတ်1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ တရုတ် ယွမ်1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ ဂျပန်ယန်း1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ ရုရှ ရူဘယ်1 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညား
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 23 Feb 2020 04:25:02 +0000.